Ururada doonaya inay codsadaan, talaabada ugu horeysa waa inaad barataa naftaada qaabkayaga. Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad dib u eegto jeneraalka guud ee aasaaska maalgelinta FAQ.
Haddii, ka dib markaan akhrino boggeena internetka, waxaad dareemeysaa in ururkaagu uu ku haboon yahay istiraatiijiyadayada maalgalinta, la soo xiriir Kooxda Firfircoon & Bulshooyinka Sinnaanta (Bulshooyinka) kahor bilaabista arjiga.
Si laguu caawiyo diyaarinta, waxaad horay u arki kartaa baadhitaan bilowga ah iyo Soo jeedinta buuxda foomamka dalabka. Fadlan ogow in aan cusbooneysiinay foomka weydiinta bilowga ah si loo yareeyo tirinta ereyga ee loo oggol yahay jawaab celinta lammaanaha Jawaabaha weydiin kastaa uma baahna inay buuxiso tirada ereyga ugu badan. Kheyraadka dheeraadka ah waxaa ka mid ah a webinar duuban waxaan martigelinay Sebtember 2020 iyo a Su'aalaha oo leh su'aalo caadi ahaan la isweydiiyo oo gaar u ah barnaamijka Jaaliyadaha.
Haddii ururkaagu ahaa deeq bixiye barnaamijkii hore ee waxbarashada ama barnaamijka Gobolka & Bulshada, fadlan la xiriir sarkaalka barnaamijka Jaaliyadaha kahor intaadan gudbin arjigaaga baaritaanka hore.
Waxaan siinaa hawlgal iyo deeqo mashruuc ururada ka jira Minnesota. Waxaan tixgelineynaa deeqaha raasumaalka keliya duruufaha gaarka ah. Marka laga reebo waxyaabo aad uyar, codsadayaashu waa inay kudhacaan Adeegga Dakhliga Gudaha inay yihiin ururo aan macaash doon ahayn oo cashuur-dhaaf ah si ay ugu qalmaan deeqda.
Hay'adaha dawladu way dalban karaan maalgalinta mashaariic hal abuur leh. Si kastaba ha noqotee, guud ahaan ma maalgelin doonno waxqabadyada dhaqan ahaan waa mas'uuliyadda keliya ee dowladda.
Aasaasiyadu waxay ugu waxtar badan tahay iyadoo xoogooda la isugu geeyo meelo kooban. Tan macnaheedu waxa weeye ma taageeri karno mashaariic badan oo mudan oo ka baxsan danaha barnaamijkeena. Tusaale ahaan, deeqo uma bixinno waxyaabaha soo socda:
Adeegyada bulshada ee aasaasiga ah, sida khaanadaha cuntada, maareynta kiisaska, ama hoyga degdegga ah
Jardiinooyinka iyo meelaha furan
Transit-iyo dadaallada la xiriira gaadiidka
Pre-K-12 barnaamijyada waxbarashada
Deeq waxbarasho ama noocyo kale oo gargaar ah oo loogu talagalay shaqsiyaadka
Shirarka, oo ay ku jiraan xaadiritaanka ama safarka, marka laga reebo xaalado dhif ah
Awqaafta iyo ololeyaasha raasumaalka, marka laga reebo xaalado dhif ah
Hawlaha leh ujeeddo gaar ah oo diineed
U ololeynta waxaa mamnuucay Xeerka Dakhliga Gudaha (fiiri qoraalka hoose)
Mu'asasadu waxay tixgelin kartaa codsiyada maalgelinta ee dadaallada sida u doodista iyo waxbarashada si loo hagaajiyo siyaasadaha iyo xeerarka maamulka ee fulinta, garsoorka, iyo hay'adaha maamulka; wadaaga macluumaadka oo ah dhexdhexaad, aan xisbi lahayn, isla markaana si buuxda u sharaxaya labada dhinac arrimaha sharci dejinta ee la sugayo; iyo cilmi baarista siyaasada.
Sida looga baahan yahay Xeerka Dakhliga Gudaha, hase yeeshe, Aasaasiyadu ma maalgelin doonto isku dayga ah inay saameyn ku yeelato sharci gaar ah oo la sugayo ama la soo jeediyay, oo ay ku jiraan tixraac, qawaaniin maxalli ah, iyo go'aanno.
Haddii aad wax dhibaato ah ku qabtid nidaamka dalabka khadka tooska ah, naga soo wac (612) 333-4220 ama dir email kooxda Bulshooyinka.